Iifonti zasimahla zeSerif zenyanga ka-Agasti | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Olungileyo abayili Bayazi ukuba ukhetho lwefonti xa usenza iprojekthi lilingana kwaye lubaluleke nangakumbi kunezinye izinto zoyilo, sisisizathu sokuba kule post sibonise isithoba. iifonti zeserif zasimahla, oza kuyisebenzisa kuyilo lwakho olulandelayo okanye ongeze kwirejista yakho yemigca.
Ngaphakathi kwimithombo esiza kuyikhankanya Uyakwazi ukufumana izitayile ezininzi, umzekelo: ubuhle, umYiputa, ukuhlekisa, njl. iphepha mvume lasimahla osetyenziselwa intengiso kunye nokusebenziswa buqu.
Ezi zezona zikhulu zeefonti zasimahla zeSerif
Le fonti yeSerif yenziwa ngokukodwa ukuba isetyenziswe kwifayile ye- uyilo lokuhlela. Iyafumaneka kwiibhokisi eziphantsi nakwibhokisi ephezulu, ukongeza ekubeni iphambili amanani opelo neesimboli, kunye nesimbo esiqhelekileyo.
Iyafumaneka kwifomathi ye-OTF.
Ngumthombo free, Ezona njongo ziphambili kukuzisa ubutshanje kule mithombo, kugxile kumagophe e iifonti ze-serif zakudala kunye nokongeza usapho olongezelelweyo lweetemplate. Ilungele iincwadi, izihloko ezikhulu, iiposta kunye nezinto ezintle.
Intsapho yaseButler ineempawu ezi-7 zetemplate, ubunzima obu-7 obuqhelekileyo, kunye nabalinganiswa abangama-334. Kwakhona, ngenxa yeglyphs yayo lungisa iilwimi ezahlukeneyo. Ifumaneka kwiifomathi zeWebhu kunye nezeDesktop.
Lo mthombo awuthathelwa ingqalelo kuphela ifundeka kakhulu kodwa ikwangoku, le fonti iyafumaneka kwaye isimahla, ngesi-Italic kunye nesiqhelo esiqhelekileyo. Inayo ingxelo epheleleyo yezitayile ezili-16.
Yiyo ephucukileyo ifonti ngoonobumba abakhulu, abanomnxeba wangoku kunye nokungakhathali. Inee-ligature ezingama-88 kunye nohlobo oluthile lwabalinganiswa abakhethekileyo. Ukongeza kokuza kwi-Semi-Bold kunye nobunzima obuqhelekileyo. Inefomathi ye-TTF.
Yifonti ngoonobumba abakhulu umzobo, ukugqibelela logos, izihloko kunye neepowusta. Ifomathi yayo yi-TTF.
Ngumthombo kumnandi kakhulu kwaye kulula ukuyifunda. Ukwakhiwa kwayo kusekelwe kumgca omnye ogobileyo kwaye unokufumaneka kwiifom ze-WOFF kunye ne-OTF.
Iqukethe i- fumlambo wase-Egypt ene-4 pesos enekeksi, yona inokusetyenziswa ngaphezu kweelwimi ezingama-40 eyahlukileyo xa usebenzisa oonobumba besiLatin. Ivela ukuba ilungele kungekuphela izihloko kodwa nayo yonke into ekufuneka ibonisiwe kwisicatshulwa.
Akhawunti ngaphezu kwe-16 izitayile ezahlukeneyo, eyahlukileyo phakathi kweRhoqo, ukuKhanya, iBold, i-Italic kunye neBold eyongezelelweyo kwaye ikwifomathi ye-TTF.
Ngumthombo nezimo Inobuntu obuhle kwaye ihambisa nokuzithemba okukhulu, ukuze isetyenziswe ngendlela efanayo ekuprintweni nakwiwebhu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Imithombo » Iifonti zasimahla zeSerif zenyanga ka-Agasti